मन्त्री दहितले दाङका सीडीओ लाई किन अपशव्द प्रयोग गरे ? « Tulsipur Khabar
मन्त्री दहितले दाङका सीडीओ लाई किन अपशव्द प्रयोग गरे ?
तुलसीपुर,४ भदौ । आफूलाई झण्डावाल गाडी नपठाएको भन्दै भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उछितो काढेका छन् । भूमिसुधार मन्त्री दहित दाङमा हुने ‘मुक्त कमलरी परिचय पत्र वितरण’ सहितका कार्यक्रममा सहभागी हुन शनिबार विमान चढेर नेपालगञ्ज पुगे । उनका लागि स्थानीय प्रशासनले कृषि कार्यालयको गाडी पठाएको थियो ।
अधिकारीहरुका अनुसार यसअघि अरु मन्त्री दाङ जाँदा पनि यो गाडी नै प्रयोग गरेका थिए । तर, गाडीमा झण्डा नभएको भन्दै मन्त्री दहित आक्रोशित भए । लगतै जिल्ला विकास समितिको अर्को गाडीमा झण्डा राख्ने डण्डी बेल्डिङ गराइयो र, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली मन्त्री दहितलाई रिसिभ गर्न बाँके र दाङको सीमाना अमेलियासम्म पुगेको थियो ।
तर, दहितले त्यो गाडी पनि चढ्न मानेनन् । एयरपोर्टबाटै चढेर आएको गाडीमा दाङ आए र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठमाथि खनिए । उनले एलडीओ र प्रहरी प्रमुखकै सामुन्ने अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गरेका थिए ।
आइतबार सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि भूमिसुधारमन्त्री दहितले सीडीओको उछितो काढेका छन् । ‘हाम्रो यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वर्तमान मन्त्रीलाई कसरी इज्जत सम्मान दिनुपर्छ भन्ने सिकेका रहेनछन्,’ उनले भने, एउटा गाडी नेपालगञ्ज पठाउन सक्दैनन् ।’
प्रकाशित मिति : २०७४ भाद्र ४ गते आइतवार